सधैं दाबेदार- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
आफ्नै भूमिमा भएको विश्वकप २०१४ को सेमिफाइनलमा ब्राजिललाई जर्मनीले ७–१ ले हराएको थियो । ब्राजिली फुटबल एक खेल हार्दैमा कहाँ मरेको थियो र ? कहाँ मर्न सक्छ र ? विश्वकप २०१८ मा छनोट हुने पहिलो देश बनेको ब्राजिल २१ औं संस्करणको सबभन्दा बलियो टिम हो ।
टिमको कमजोरी भनेको सायद नेयमारले बोकिरहेको चोट हो, तर यो पनि निको भइसकेको जस्तो छ ।
असार १, २०७५ हिमेश वज्राचार्य
काठमाडौँ — फुटबललाई ‘ब्युटिफुल गेम’ भनेर नाम राख्ने अरू कोही होइन, ब्राजिली पेले थिए । उनलाई लाग्थ्यो, फुटबल आफैंमा सुन्दर छ । यो उनको अनुभव हो । फेरि अरूले पनि फुटबललाई ‘ब्युटिफुल गेम’ भन्छन्, किनभने पेलेको ब्राजिलले पस्कने फुटबल पनि त सुन्दर हुने गर्छ । भनिन्छ, युरोपेलीहरू दिमागले फुटबल खेल्छन्, ब्राजिलले मनले ।
ब्राजिलीको फुटबल माया बेजोड छ र यो ठ्याक्कै मनबाट बाहिर आउने गर्छ । फेरि युरोप र ब्राजिली शैलीको फुटबल पनि फरक छ ।
ब्राजिलियनहरू व्यक्तिगत खेल कौशलता देखाउन माहिर हुन्छन् । छोटा–छोटा पास खेल्छन्, अनि गोलका लागि सुन्दर माहोल सिर्जना गर्छन् । यी त भए, ब्राजिली फुटबलबारे साँच्चै केही सुन्दर शब्द । विश्वकप २०१८ हिजो रुसमा सुरु भइसकेको छ । अहिले पूरा विश्वकपमा यसकै चर्चा छ । अनि विश्वकप भनेपछि ब्राजिल कसरी छुट्न सक्छ र ? फुटबलको चर्चा ब्राजिलबिना पनि सम्भव हुन्छ र ? ब्राजिली फुटबलबारे अनौठा न अनौठा किस्सा सुन्न पाइन्छ, पत्याउन नै गाह्रो
हुने खालका ।
भनिन्छ, फुटबल जन्मेको त इंग्ल्यान्डमा हो, तर यसलाई हुर्काउने काम भने ब्राजिलले गर्‍यो । सबैलाई थाहा भएकै तथ्य हो, ब्राजिल नै एक मात्र त्यस्तो देश हो, जसले विश्वकपका सबै संस्करण खेलेको छ । यो गर्विलो प्रदर्शनको कीर्तिमान हो, ब्राजिलको नाममा रहेको । अनि ब्राजिल विश्वकपको सबैभन्दा सफल टिम पनि हो । सबैखाले तथ्यांकले यही भन्छ । उसले पाँचपल्ट विश्वकप जितेको छ । के यसपल्ट ब्राजिलले फेरि विश्वकप जित्न सक्छ त ?
ब्राजिलीले विश्वकपमा ब्राजिललाई नै समर्थन गर्ने त भयो नै, त्यसबाहेक पनि धेरैका लागि विश्वकप हुनुपर्छ, समर्थन गर्ने टिम ब्राजिल नै हुने गर्छ । हाम्रै एसियामा पनि ब्राजिली समर्थक धेरै छन् । अनि नेपालमा पनि । अरू बेला फुटबलमा खासै चासो नराख्ने पनि विश्वकप आउनुपर्छ, ब्राजिली समर्थक हुन्छन् । यस्तो छ, ब्राजिल र उसको फुटबल । फेरि उही प्रश्न के यसपल्ट ब्राजिलले विश्वकप जित्न सक्छ त ? यसको उत्तर ठ्याक्कै यस्तो भने छैन ।
तर निश्चित छ, ब्राजिल विश्वकप २०१८ को उपाधि जित्ने सबैभन्दा बलियो प्रत्याशी हो । धेरै फुटबल पण्डितले पनि यही भनिरहेका छन्, ब्राजिल नै हो, यसपल्ट उपाधि जित्न सक्ने टिम । यसपल्टको विश्वकपको टाइसिट यसो पल्टाउनुपर्छ र समीकरण तयार पार्नुपर्छ, ब्राजिलको सम्भावना निकै जीवन्त देखिन्छ । टाइसिट धेरै हदसम्म ब्राजिलको पक्षमा पनि देखिन्छ । सायद यसपल्ट भाग्य ब्राजिलीको दाहिने छ कि ? यी त भए, सबै सम्भावनाहरू ।
सबैभन्दा पहिले चार वर्ष अगाडिको विश्वकपमा फर्कौं न । त्यति बेला ब्राजिलले आफ्नै भूमिमा विश्वकप आयोजना गरेको थियो । त्यति बेला पनि भनियो, विश्वकप जित्ने ब्राजिल नै हो । टिम सेमिफाइनल पनि पुग्यो, यस्तोमा उपाधि लगभग दुई जित मात्र टाढा थियो । तर उफ, ब्राजिल सेमिफाइनलमा जर्मनीको हातबाट नराम्रोसँग पराजित रह्यो, ७–१ को कल्पनीय स्कोरमा । त्यति बेला सबैले भन्न थालेका थिए, अब केही होइन, ब्राजिलको फुटबलले मृत्यु आत्मसात् गर्‍यो ।
साँच्चै ब्राजिली फुटबलको सय वर्षको इतिहासमा टिमले यति नमीठो हार पहिला कहिले नै बेहोरेको थिएन । धेरैले के पनि अनुमान गरे भने अब ब्राजिली फुटबल कहिले पनि पहिले जस्तो हुने छैन । किन यस्तो भयो भनेर धेरै कारण पनि खोजिए । जतिका मुख, उत्तिकै फरक धारणा अगाडि आए । तर यी आरोप, पीडा अनि दु:ख सेलाउन धेरै समय लागेन । त्यसको दुई वर्षमै दक्षिण अमेरिकी विश्वकप छनोट सुरु भयो र यो सुरुआत थियो, ब्राजिली फुटबलको पुनर्निर्माण ।
अझ भनौं, पुनर्उत्थान । पुनर्उत्थान ? ब्राजिली फुटबल एक खेल हार्दैमा कहाँ मरेको थियो र ? कहाँ मर्न सक्छ र ? विश्वकप २०१८ मा छनोट हुने ब्राजिल पहिलो देश बनेको थियो । उसले छनोटमा साँच्चै गज्जब खेल्यो । त्यसो त छनोटमा ब्राजिल पहिलो खेलमै चिलीसँग २–० ले पराजित रहेको थियो । तर त्यसपछि ब्राजिलले कुनै खेल गुमाएन, लगातार १७ खेलमा । यसमा अर्जेन्टिनामाथि ३–० को जित अनि उरुग्वेलाई उसकै भूमिमा ४–१ ले हराउनु छनोटको केही सम्झनालायक खेल थिए ।
जति बेला पूरा विश्वकपका छनोटमा अरू ठूला टिम भनिनेहरू संघर्ष गरिरहेका थिए, त्यति बेला ब्राजिलले भने आरामले खेलिरहेको थियो किनभने प्रत्येक खेलपछि छनोट उसको एक पाइला नजिक आइरहेको थियो । छनोटयताका अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा भने ब्राजिलले प्रभावशाली जित निकालेका छन्, जसमा जर्मनीविरुद्ध १–० जित पनि पर्छ । फेरि एकपल्ट इतिहास पल्टाउने हो भने ब्राजिलले जितेको विश्वकपको सूची बनाउनु ठीक हुन्छ, ब्राजिल सन् १९५८, १९६२, १९७०, १९९४ र २००२ को विजेता हो ।
ब्राजिलले सन् १९५० र १९९८ को विश्वकप फाइनल पनि खेलेको थियो । सन् २०१० को विश्वकपमा खराब प्रदर्शनपछि ब्राजिलले पूर्वखेलाडी डुंगालाई प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको थियो । तर डुंगाले फेरि निराश पारे, ब्राजिली फुटबललाई । २००२ को च्याम्पियन प्रशिक्षक लुई फिलिप स्कोरलरीले फेरि २०१४ मा टिम सम्हाले । तर उनको टिमविरुद्ध सात गोल गरे जर्मनीले ब्राजिलमा भूकम्प नै ल्याइदिएको थियो । त्यसपछि आए, प्रशिक्षकमा लियोनार्डो बाची । सायद धेरैले उनलाई यो नामले चिन्दैनन् । उनलाई खासमा चिनिने ‘टीटी’ उपनामले हो । यो त हाम्रो उच्चारण भयो । पोर्चुगाली भाषामा यसको खास उच्चारण भने ‘चिची’ हुन्छ ।
उनी ब्राजिली टिममा के आए, टिममा फेरि ज्यान फर्केको थियो । यी चिची ब्राजिलमै जन्मे हुर्केका फुटबल व्यक्तित्व हुन् । उनीमाथि कुनै पनि बेला कुनै पनि अर्थमा युरोपेली फुटबलको प्रभाव परेको छैन, बरु उनी दक्षिण अमेरिकी शैलीको फुटबलमै भिजेका प्रखर प्रशिक्षक हुन् । उनले टिम सम्हालेयता ब्राजिलले लगातार सात खेल जितेको थियो, छनोटका । उनी ४–१–४–१ को शैलीमा फुटबल खेलाउन रुचाउँछन् । यो शैलीको विशेषता हो, आक्रामक फुटबल र त्यसलाई सुहाउँदा आकर्षक छोटा–छोटा पास ।
ब्राजिली मिडियालाई पनि यो शैली खुबै मन पर्छ, त्यसैले मिडियाले पछिल्लो समय टिम, खेलाडी र प्रशिक्षकको लगातार प्रशंसा गरिरहेको छ । चिची आवश्यकताअनुसार शैली परिवर्तन गर्न पनि माहिर छन् । र, यो शैली हो, ४–३–३ को । अहिलेको ब्राजिली टिमको शक्ति के हो त ? यसको पहिलो उत्तर हो, टिममा नयाँ र पुराना खेलाडीको राम्रो मिश्रण छ । यो भनेको जोस र अनुभवको मिलन हो । नेयमारदेखि जेसस, कोउटिन्हो, विलियन जस्ता खेलाडीमा कमजोरीभन्दा सबलता नै बढी छ ।
ब्राजिली टिमको मुख्य जिम्मेवारीमा त नेयमार नै हुनेछ । ग्याब्रिएल जेसस त चिचीका प्रिय खेलाडी हुन्, टिममा उनको पनि बलियो उपस्थिति हुनेछ । पउलिन्होलाई मुख्य खेलाडीको सूचीमा थपे हुन्छ । चिचेको नेतृत्वमा उनले पनि राम्रो गरिरहेका छन् । टिमको कमजोरी भनेको सायद नेयमारले बोकिरहेको चोट हो, तर यो पनि निको भइसकेको जस्तो छ । अन्त्यमा, फेरि एकपल्ट के भने ब्राजिल उपाधिको बलियो दाबेदार छ किनभने उससँग टिम छ, खेलाडी छ, लय छ । अनि त्यसलाई सुहाउने भाग्य पनि ।
प्रकाशित : असार १, २०७५ ११:२०
असार १, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — इन्स्टाग्रामले आफ्नो नयाँ अपडेटमा एउटा नयाँ फिचर थपेको छ । यो फिचरले प्रयोगकर्ताले आफू ट्याग भएको स्टोरिजलाई आफ्नो प्रोफाइलमा रि–पोस्ट गर्ने सुविधा दिनेछ । प्रयोगकर्ताले आफूलाई ट्याग नभएको अरूको स्टोरिज फेरि पोस्ट भने गर्न पाउने छैनन् ।
‘कुनै प्रयोगकर्तालाई कसैले आफ्नो स्टोरिजमा ट्याग भए, उनीहरूले त्यसको नोटिफिकेसन पाउनेछन्,’ इन्स्टाग्रामको ब्लगमा भनिएको छ, ‘उनीहरूले सोही नोटिफिकेसनमा क्लिक गरी रिपोस्ट गर्ने फिचर प्रयोग गर्न सक्छन् ।’ यो सुविधा भने पब्लिक इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा मात्रै लागू हुनेछ । एकाउन्ट प्राइभेट गरेका प्रयोगकर्ताले यो सुविधा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
प्रकाशित : असार १, २०७५ ११:१३